September 2020 - Page2of 10 - MM Daily Life
ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ပြီးရင် မစားသုံးသင့်ကြောင်း လူသိပ်မသိသေးတဲ့ အစားအစာများ
ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ပြီးရင် မစားသုံးသင့်ကြောင်း လူသိပ်မသိသေးတဲ့ အစားအစာများ အခုခေတ် အိမ်တိုင်းလိုလိုမှာ ရေခဲသေတ္တာရှိကြပြီး အစားအစာတွေကိုလည်း တစ်ပတ်စာလောက် သိမ်းစည်းကာစားသောက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာက နေ့တိုင်းဈေးသွားနေရတဲ့ အခက်အခဲကိုလျော့ကျစေပြီး အလုပ်ရှုပ်သက်သာစေပေမယ့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားတာနဲ့ ပါဝင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်ပါလျော့ကျပြီး အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့ အစားအစာတွေလည်း ရှိနေလို့ပါ ။ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်မသိမ်းထားသင့်တဲ့ အစားအစာ(၆)မျိုးကတော့… (၁) အာလူး ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်သိမ်းမထားသင့်တဲ့ အစားအစာတွေရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ အာလူးပါဝင်ပါတယ်။ အာလူးမှာပါဝင်တဲ့ ကဆီဓာတ်က ရေခဲသေတ္တာထဲရောက်တဲ့အခါ သကြားအဖြစ်ကိုပြောင်းသွားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အာဟာရမဖြစ်ပဲ ဘေးဥပါဒ်ပဲဖြစ်စေလို့ မထည့်ထားသင့်ပါဘူးနော်။ (၂) ဖရဲသီး ဖရဲသီးကို အေးခဲထားတ့အခါ သူ့မှာပါဝင်တဲ့ အာဟာရဓာတ် ၊ ရေဓာတ် အကုန်လုံးခမ်းခြောက်သွားပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့်ဖရဲသီးအေးအေးလေးစားချင်သူတွေအတွက် ပါဝင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုလျော့အောင် ပလတ်စတစ်အကြည်လေးဖြစ်ဖြစ် ဘူးလေးထဲထည့်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုနဲ့အုပ်ပြီးတော့မှ … Read more
သင့်ရဲ့ ဆံပင်ပုံစံကိုကြည့်ပြီး သင့်ရဲ့စိတ်ဓါတ်က ဘယ်လိုဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်…
September 27, 2020 by MM Daily Life
သင့်ရဲ့ ဆံပင်ပုံစံကိုကြည့်ပြီး သင့်ရဲ့စိတ်ဓါတ်က ဘယ်လိုဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်… ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော် …။ ဆံသားတွေမှ တစ်ဆင့် မိန်းကလေးတွေရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို သိနိုင်လူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို သူ့ ရဲ့ ပုံစံအမျိုးအစုံကို ကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ် …။ ဒီလို နည်းလမ်းမျိုးစုံထဲကမှ သူ့ရဲ့ ဆံပင် ပုံစံကို ကြည့်ပြီး ခံစားနိုင်ပါတယ် …။ လူတစ်ယောက်က သူနဲ့ လိုက်မဲ့ ဆံပင် ပုံစံသူကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံ မျိုးစုံကို ထားကြပါတယ်။ သူတို့ ဆံပင်ပုံစံလေးတွေကမှ သူတို့ အကြောင်းလေးတွေကို သိရှိနိုင်ကြောင်း မျှဝေ ပေးမယ်နော် …။ ဆံပင်တိုကြိုက်နှစ်သက်သော မိန်းကလေးများ – ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးက အနုပညာသွေးအပြည့်အဝ ပါရှိကြပါတယ်။ သူတို့သဘာဝ အလှအပကိုလည်း ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ် …။ သူတို့ကို သူတို့ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး … Read more
သံပုရာသီးစိမ်ထားတဲ့ရေကို အမြဲသောက်ပေးခြင်းကြောင့် ရရှိလာနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးများ သံပုရာသီးဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိုးပြုစေတဲ့ ဓာတ်တွေအများကြီးပါဝင်လို့နေပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ကျန်းမာရေးလိုက်စားသူတွေဟာ ရိုးရိုးရေတောင်မဟုတ်တော့ဘဲ ရေထဲကို သံပုရာကွင်းလေးတွေ ထည့်ပြီးသောက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီလိုသောက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးပြုစေလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။ (၁) ရေဓတ်ပိုပြည့်စေတယ် အမျိုးသမီးတွေဟာ ပုံမှန်ရေဓာတ် ၉၁ အောင်စလိုအပ်သလို အမျိုးသားတွေကတော့ ၁၂၅ အောင်စတောင် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ရိုးရိုးရေသောက်မယ့်အစား အရသာနဲ့အနံ့ပါအောင် သံပုရာသီးလေးထည့်ပေးခြင်းဟာ ရေကိုပိုသောက်ချင်စိတ်ဖြစ်စေတဲ့အတွက် ရေဓာတ်လည်း ပိုပြည့်ဝစေပါတယ်တဲ့။ (၂) ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် စီ သံပုရာသီးမှာ ဗီတာမင် စီပါဝင်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်း သိမှာပါ။ ဗီတာမင် စီ ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကို အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ ဓာတ်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ဗီတာမင် စီ ဟာ antioxidant ဓာတ်ပေါကြွယ်ဝတဲ့အပြင် … Read more
သင့်မေမေကို လုံးဝ စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားစေနိုင်တဲ့ သင့်ရဲ့အပြုအမူ (၄) မျိုး
သင့်မေမေကို လုံးဝ စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားစေနိုင်တဲ့ သင့်ရဲ့အပြုအမူ (၄) မျိုး မိဘဆိုတာ ကိုယ်ဆိုတာ ဖြစ်တည်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ အဖိုးတန် လူသားတွေပါ။ မိဘတွေဆိုတာ သားသမီးကို အကောင်းဆုံး အခြေအနေနဲ့ မြင်ချင်ကြသူတွေချည်းပါပဲ။ မိဘတွေက ထုတ်မပြောရင်တောင်မှ သူတို့တွေက သားသမီးတွေကို ချစ်လွန်းလှပါတယ်။ သားသမီးတွေဆီက ဒီလိုမျိုး အခြေအနေတွေကို မြင်လိုက် သိလိုက်ရရင်တော့ မေမေတွေက အကြီးအကျယ် စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့မေမေတွေက စိတ်မကောင်း ဖြစ်တာကို သားသမီးကို မမြင်စေချင်ကြပါဘူး။ (၁) မိဘထက် တခြားသူကို ပိုဂရုစိုက်တာ သားသမီးတွေက မိဘကို ချစ်ပြရင် မိဘတွေက အပျော်ရွှင်ဆုံး လူသား ဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ်က ရင်နဲ့ ရင်းပြီး မွေးထားရတဲ့ သားသမီးက သူတို့ရဲ့ ရည်းစားတွေ၊ ချစ်သူတွေနဲ့ … Read more
September 26, 2020 by MM Daily Life
မြန်မာနိုင်ငံကြီးအတွက် အရေးကြီးသော အနာဂတ်ဟောကိန်းများ…
မြန်မာနိုင်ငံကြီးအတွက် အရေးကြီးသော အနာဂတ်ဟောကိန်းများ… မြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာလာမေး ကြတယ် ကျွန်တော် ကလည်း ဟောကိန်းတွေ ဟောချက်တွေ ဘာမှမပြောချင်တာနဲ့ ငြိမ်နေခဲ့တာပါ …။ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်သူများက သိချင်တယ် တစ်ကဲကဲ မို့ ဟောကိန်းအချို့ ထုတ်ပြ ပါရစေ …။ ၁. ကိုဗစ်ရောဂါဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနည်းဆုံး လူတစ်သောင်း ဝန်းကျင်လောက် ကူးစက်သွားပါ လိမ့်အုန်းမည် …။ ၂. ပိတ်ပင်ထားသော မြို့များတွင်လည်း ထပ်မံတွေ့ ရှိရတတ်ပြီး စီးပွားရေးကပ်ဆိုက် တတ်ပါလိမ့်မည် …။ ၃. ပွဲလမ်းသဘင်များ အားလုံးပိတ်ပင်ခံရပြီး ကိုဗစ်ရောဂါအပြင် အခြား စိတ်ရောဂါများကြောင့် ၂၀၂၁ အတွင်း စိတ်ကျသူများ ၊ သတ်သေသူများ ၊ အကြွေးမြီးများဖြင့် ဒုက္ခရောက်သူများ ပေါများ … Read more
ယောကျာင်္းလေးတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်လား၊မချစ်လား စမ်းသပ်နည်းများ…
ယောကျာင်္းလေးတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်လား၊မချစ်လား စမ်းသပ်နည်းများ… ( ၁ ) မျက်ခွက်ကို လက်ဝါး နဲ့ ၁၄ ချက်လောက် ဘယ် ပြန် ညာ ပြန် ဆင့်တွယ် ကြည့်ပါ ။ အား ပါ ပါစေ …။( တစ်ချက် ကလေး မှတောင် ဒေါသ မထွက်ဘူး ဆိုရင် သေချာတယ် အဲ့ဒီ့ ယောကျာင်္းလေး အချစ်က အချစ်စစ် အချစ်မှန် ပါ…) ( ၂ ) နှာနုရိုး တည့်တည့် လက်သီး နဲ့ စိတ်ရှိလက်ရှိ ထိုးပါ ။ သွေးထွက် သွားပါစေ …။( ယောကျာင်္းလေး ဆိုတာ ကိုယ့်အသား နာရင် နည်းနည်းလေးမှ မခံတတ်ကြတဲ့ … Read more
ရည်းစားအများကြီး ထားခဲ့ခြင်းကြောင့် ရရှိလာနိုင်တဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာများ…
September 25, 2020 by MM Daily Life
ရည်းစားအများကြီး ထားခဲ့ခြင်းကြောင့် ရရှိလာနိုင်တဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာများ… အခုလိုခေတ်ကြီးထဲမှာ ရည်းစားဆိုတာ တစ်ယောက်မကထားဖူးခဲ့ကြမှာပါ။ တစ်ခါတစ်လေ အချစ်ရေးကံမကောင်းလို့ ရည်းစားတွေအများကြီး ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေလည်း ရှိကြမှာပေ့ါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ ဒီကောင်မလေး ရည်းစားများတယ်ဆိုပြီး သွားပုတ်လေလွင့် ကဲ့ရဲ့နိုင်ပေမယ့် တကယ်တမ်း ရည်းစားများခြင်းဟာ ရှေ့ဆက်လျှောက်မယ့် ကိုယ့်ဘဝခရီးလမ်းအတွက် အကျိုးရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ဘာတွေများဖြစ်မလဲ တစ်ချက်လောက် ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် …။ (၁) အမျိုးသားတွေအကြောင်း ပိုသိလာတယ်” ရည်းစားများပြီဆိုမှတော့ ပတ်သက်ခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသားတွေလည်းဘမှာအများကြီး ရှိခဲ့မှာပေ့ါ။ ဒါကြောင့် အမျိူးသားတို့ကို အကဲခတ်တဲ့စွမ်းရည်ဟာလည်း အတော်လေး တိုးတက်နေပါပြီ။ အမျိုးသားတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို ချဉ်းကပ်လာခဲ့ရင် သူ့ရဲ့ ပုံစံ၊ ပြောဆိုနေထိုင်မှု စတာတွေကိုကြည့်ယုံနဲ့ ဒီလူဟာ ဟန်ဆောင်နေတာလား၊ တကယ်လားဆိုတာ သိနိုင်နေမှာပါ …။ (၂) ရလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေ” ရည်းစားတစ်ယောက်နဲ့ပြတ်ပြီးတိုင်း ကိုယ်မှားခဲ့တာတွေကို … Read more